भारत र चीनमा पुरानै राजदूत पठाउने तयारी « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 14 August, 2016 9:45 am
३० साउन । सरकारले भारत र चीनमा पुरानै राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनासाथ भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि डा. महेश मास्केको नाम राजदूतमा सिफारिश हुनेछ ।
डा. मास्के चाहिँ चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर पनि थप चार महिना बेइजिंग बसेर फर्केका हुन् । माओवादीको कोटाबाट नियुक्त मास्केको कार्यकाल सकिएपछि थप अर्को कार्यकालका लागि माओवादी नेतृत्वले निकै जोड गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि उनको चीन भ्रमणसम्मका लागि भन्दै चार महिना कार्यकाल थपिएको थियो ।
नयाँ समीकरण बनाउन सुरुदेखि नै सक्रिय उपाध्याय ओली सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि पनि दिल्ली पुगेर नेपाली दूताबासकै साधन-स्रोत प्रयोग गर्दै त्यसलाई सफल बनाउन खटिएका थिए । अहिले उनको पार्टी कांग्रेस सरकारको निर्णायक हैसियतमा रहेको र भारतीय पक्ष पनि उपाध्यायकै पक्षमा रहेका कारण उनी राजदूत हुनमा कुनै समस्या छैन । चुनाव हारेका कारण उनी मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छैन र उनका लागि अर्को कुनै इच्छाएको जिम्मेवारी दिने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा उपाध्याय दोहोरिएर दिल्ली जाने निश्चित रहेको उच्च स्रोतले बतायो ।